Masuul xukumada ka tirsan oo ka hadley shir la sheegey in Golaha Wasiirada Somaliland ka yeesheen imaatinka Farmaajo. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masuul xukumada ka tirsan oo ka hadley shir la sheegey in Golaha...
Masuul xukumada ka tirsan oo ka hadley shir la sheegey in Golaha Wasiirada Somaliland ka yeesheen imaatinka Farmaajo.
Xukumada somaliland ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartey warka warbaahinta badana ay saaka isla dhex marayeen ee sheegaya in golaha wasiirada somaliland ka shireen imaatinka farmaajo ee hargeisa oo ay ku sheegeen in cod aqlabiyad ah ay ku ansixiyey golaha wasiirada somaliland.
“Golaha Wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland wax shir ah oo ku saabsan imaatinka Farmaajo ee Hargaysa ma aysan yeelan. Warka baraha Bulshada lagu qoray ee sheegaya in Goluhu shiray waa war aan sal iyo baartoonna lahayn oo aan waxba ka jirin.
Muwaadiniinta Somaliland sidaas ha ula socdeen “.
Xog-hayaha Golaha Wasiirada Somaliland.
Israel oo masaafurisay sarkaal ka tirsan Hey’adda Xuquuqda ee Human Rights...
Al Shabaab oo war kasoo saaray qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho